Manome toky izahay fa ny FELVIK MINK LASHES rehetra dia vita amin'ny volom-borona 100%.
Ny volom-borona mink dia toa voajanahary sy malefaka kokoa noho ny fibres synthetic. Raha ampitahaina amin'ny volon'olombelona, ​​ny volom-bolo mink dia manana torohevitra voajanahary bebe kokoa sy curl tsara tarehy kokoa.
Tsy misy herisetra 100%?
FELVIK dia nanambara fa manohitra ny habibiana ataon'ny biby isika!
Minks dia mandatsaka volo amin'ny fotoana sasany. Ny mpiasa dia manangona ny volony amin'ny fotoana mahazatra, noho izany dia tsy ilaina loatra ny manimba ireo biby mahafinaritra. Tena tsy misy maninona ny biby. Ny vokatra FELVIK MINK rehetra ataontsika dia tsy misy habibiana 100%!
Fahadiovana amin'ny kapoka Mink?
A: ny volon'ny mink rehetra dia tsy maintsy fenoina toerana misy rano malefaka mazava mandritra ny ora maro hisasana madio.
B: ary avy eo mamakivaky ny fizotran'ny hafanana miakatra 300 degre hamonoana ny ankamaroan'ny vatosoa.
C: Alohan'ny hampiasana ny tarika dia apetraka eo ambanin'ny leds Ultraviolet ny volon'ny mink mba hatao sterilization.
Ireo kapoka volom-borona mink dia hapetraka amin'ny fonosana tany am-boalohany mba hadio hatrany.
Azo ampiasaina indray ve ny volomaso Felvik?
Ny kapoka volom-borona FELVIK dia azo atao hatramin'ny in-25 miaraka amin'ny fikarakarana sahaza. Ny endrika sy ny fiolahana ny kapoka dia afaka mijanona tsy miova na dia efa imbetsaka aza.
Mavesatra voajanahary sy maivana?
FELVIK Mink Lashes dia manana fehin-kibo manify sy maivana ary malefaka, malefaka, voajanahary ary malefaka ny volombava, mamela anao hikorontana toy ny kapoka ataonao ihany.
Ny fehin-kibo manify sy malefaka an'ny mink lash dia mijanona ho toy ny volomaso, na dia efa nampiasaina im-betsaka aza, no mora kokoa ny fampiharana ny kapoka!
MBOLA HANAHARAHANA ANAO FOANA NY momba anao:
1.Can FELVIK LASHES afaka manamboatra volomaso?
A: Eny, ny FELVIK LASHES dia manamboatra fantsom-panafody MINAS, 3D MINK LASHES, FOX AND MINK BLENDED LASHES, HORSE HAIR LSAHES araky ny fangatahan'ny mpanjifa. Hataontsika miavaka sy manokana ny kapoka mba hahafahanao mifaninana amin'ny marika fanta-daza.
Aza adino: manamboara volomaso mangataka MOQ 500pairs.
2.Can FELVIK LASHES afaka manamboatra fonosana volomaso?
A: Eny, manolotra fonosana fehy isan-karazany amin'ny habe samihafa izahay.
Ary azo antoka, azonay natao koa ny nanonta ny logo anao tamin'ny fonosana.
Ny mpanjifa dia mila manolotra LOGO na famolavolana famonoana famaohana amin'ny .AI na .PDF amin'ny sarin-tsarimihetsika. Ny fisie .AI sy .PDF ihany no azo ampiasaina amin'ny fanontana.